Wararka - Shirkii kooban ee mudada dhexe ee Shandong Zhihua Industry Pipe Industry/Huabao Mashruuca Dhiirrigelinta Makiinadaha Leh ayaa si guul leh loo qabtay
Bishii Luulyo 28-keedii, 2020, shirkii kooban ee muddada kooban ee wejiga koowaad ee Mashruuca Dhiirrigelinta Caatada ah ee Warshadaha Biibiile Zhihua/Makiinadaha Huabao ayaa si guul leh loo qabtay. Zhang Wei, maareeyaha guud ee warshadaha biibiilaha Zhihua/Makiinadaha Huabao, iyo maamulka shirkadda ee dhammaan heerarka, La -taliyaha Mashruuca Shandong Huazhi Kooxda ayaa ka qaybgashay kulankan.
Kulankani wuxuu soo koobay guulaha, khaladaadka iyo tillaabooyinka xiga ee dhiirrigelinta caatada ah 2020, wuxuuna tilmaamay jihada horumarka wanaagsan ee dallacaadda caatada ah qeybtii labaad ee sannadka. Shaqaalaha heerarka oo dhan waxay kaloo muujiyeen sida ay uga go'an tahay inay bartaan caatada oo ay ku dadaalaan inay heer sare gaaraan.
Sannad badhkii kor -u -qaadista caatada ah, qaar ka mid ah waxyaabaha maareynta ayaa laga beddelay wax aan waxba ahayn. Miyir -qabka iyo dabeecadda shaqaalaha ayaa si tartiib -tartiib ah isu beddelaya, oo hawlaha maamulku waxay u muuqdaan kuwo la jaangooyo.
Iyadoo lagu saleynayo bay'ada dibadda iyo marxaladda horumarka dhabta ah ee meheradda, istaraatijiyad hagaajin urur iyo dhexdhexaad ah ayaa la diyaariyey, taasoo aasaas wanaagsan u ah hawl-qabadka nidaamka xiga.
In la sameeyo nidaam maareyn shirka shirka, la jaangooyo heerarka maareynta kulanka ee heer walba, lana hubiyo wax ku oolnimada qaab dhismeedka shirka ee shirka.
Heerarka qiimaynta waxqabadka iyo qorshayaasha qiimaynta ayaa la sameeyay oo si tartiib tartiib ah loogu dabaqay qiimaynta natiijada. Jihaynta dhiirrigelinta ayaa la aasaasay oo saamayntiisu waxay bilaabmaysaa inay muuqato.
Iyada oo loo marayo xakamaynta hannaanka iyo jiidista natiijada, qiimaynta is -waafajinta ee xisaabaadka ayaa lagu daray maareynta caadiga ah, iyo qaab -dhismeedka alaabada ayaa noqonaysa mid caqli -gal ah oo si tartiib -tartiib ah ugu adeegta ururka wax -soo -saarka iyo bixinta dalabka.
Dhiirrigelinta wax -ku -oolka ah ee khadka moodalku wuxuu bixiyaa waddo cad oo la hirgelin karo si loo hagaajiyo maareynta goobta wax -soo -saarka.
Habka maaraynta qorshaynta dhexe ayaa markii hore la furay, kaas oo bixin kara hagitaan cilmiyeed iyo wax ku ool ah iyo dammaanad qaadka geedi-socodka wax-soo-saarka oo dhan, wuxuuna sameeyay hawlgal jadwal u ah jadwalka iyada oo la adeegsanayo nidaamka.